Is-khaarijinta oo cirka isku shareertay magaalada Göteborg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Is-khaarijinta oo cirka isku shareertay magaalada Göteborg
La daabacay måndag 9 september 2013 kl 09.50
Mar kale ayaa shalay galabtii rasaas laga maqlay xaafadda Hisingen ee magaalada Göteborg. Dad badan ayaana ka markhaanti kacay in xabbado badan la isku ridey meel ay carruur badani ku cayaareysey.
Ciidamada boliisku waxay aamminsan yihiin in is-rasaaseyntaan ka dhacday waddada Sommarvädersgatan ee xaafadda Biskopsgården ay la xiriirto dilkii labada nin ee toddobaadkii hore ka dhacay aaggaas.
- Waxaan u aragnaa in ay is-rasaaseyntaani lug ku leedahay dilkii toogashada ahaa ee dhacay arbacadii la soo dhaafay. Haddana baaritaan ayaan wadnaa oo jawaab intaas ka badan kama bixin karno, ayuu Sven Alhbin oo ah siihayaha madaxnimada ciidamada dembiyada ee boliiska.
Boliisku wuxuu is-rasaaseyntaan u aaneynayaa cadaawad gabowdey oo u dhexeysa laba kooxood oo dhallinyaro ah. Waxaa rasaas lagu furay aqal dabaqyo badan ka kooban, halkaas oo xabbuhu gudaha u galeen laba guri. Qof markhaanti ah oo arkay wuxuu idaacadda P4 Göteborg u sheegay in uu arkay dad hubeysan oo halkaask u yimid mootooyin ama dhugdhugley.
- Carruur badan ayaa halkaas joogtey, waxaana isku dayey in aan meel ammaan ah geeyo.
Qof kale oo goobjoog wuxuu sheegay in uu ka welwelsan yahay sidii uu halkaas u sii degganaan lahaa, uuna ka cabsi qabo in dhacdooyin noocaan oo kale ay halkaas ka dhacaan.
- Kama guuri karno halkaan oo meel aan u guurno ma haysanno, ayuu yiri qofkaan markhaantiga ahi.
Boliisku waxay hadda gacanta ku hayaan dad badan oo waraysi lala leeyahay, laakiin ilaa hadda ma jirto cid loo qabtay rasaastii la ridey maalintii axadda. Ma jirto cid ay dhaawac ka soo gartay rasaastaas.
Ilaa hadda waxaa sannadkaan Göteborg iyo agagaarkeeda ka dhacay in ku dhow 30 is-xabbadeyn. Waxay ahayd arbacadii fiidnimadii kolkii laban in toogasho lagu dilay iyagoo ku sugan xaafadda Biskopsgården. Jimcihiina nin ayaa lagu dhaawacay xaafadda Angered, halka maanta subaxnimadiina nin lugta looga toogtey meel ku taal xaafadda Lundby oo ka tirsan Hisingen.
Guddoomiyaha Golaha degmada oo ka tirsan xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga Anneli Hulthén ayey arrintaani ka argagixisey. Waxayna golaha degmada ugu yeertay in berri subaxnimadii isugu yimaadaan kulan degdeg ah.